२०७७, २३ कार्तिक आईतवार १६:३३
कोभिडको चपेटामा परेको अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्रीका प्राथमिकताकाहरु के के ? (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं । कोभिड १९ संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचन यस वर्षपनि देखिने निश्चित छ । कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई
एउटा व्यक्तिको प्रयासले विकासमा कति प्रभाव पार्छ ? गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीको अन्तर्वार्ता
सल्यान । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तीव्र विकास र सही नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण उनले आफ्नो गाउँपालिका दार्मामा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तमा समेत लोकप्रियता हासिल गरेका छन् । लगनशील, हँसिलो
अर्थमन्त्री पौडेलको आह्वान : ‘अर्थतन्त्र भी आकारमा पुनः स्थापित हुन्छ, सबैले मेहनत गरौँ’ (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं । चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा परेको मुलुकलाई भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप समस्यामा पारेको थियो
लोकतान्त्रिक सरकार भएपनि मानवअधिकार मैत्री बन्न सकेन : अनुपराज शर्मा
काठमाडौं । संविधान लोकतान्त्रिक भएपनि सरकार मानअवधिकार मैत्रि बन्न नसकेको मानअवधकिार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारले अलोकतान्त्रिक नीति र कानून बनाउँदो रहेछ भन्ने
सरकारको तयारी र योजना नभएको कारण अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गयो : डा. बाबुराम मरासिनी
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर र लक्षण सहित संक्रमित हुनेको संख्या उलेख्य मात्रामा बढीरहेको छ । यसमा नागरिकको लापरबाही र सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको
काठमाडौं । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) लाई टुङ्गो लगाएको छ । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीले साझा पहिचान प्राप्त
काठमाडौं । सरकारले भर्खरै तेजाव आक्रमणको घटना नियन्त्रण र तेजाब बिक्रि वितरण नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुङ्बाहाङ्फेले
विषम परिस्थितिमा समग्र संसद कसरी अगाडि बढ्छ ? सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगको अन्तर्वार्ता
काठमाडौं । अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था छ । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै चालु अधिवेशन बजेट पास गर्ने वित्तीकै स्थगित गरिएको थियो । कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र
मदन पुरस्कारको गरिमा थाम्न सकिन्न कि भन्ने डर छ : चन्द्रप्रकाश बानियाँ
काठमाडौं । इतिहासका जानकार तथा लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँले तत्कालीन पर्वत राज्यको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर लेखेका ‘महारानी’ उपन्यासले २०७६ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछि अहिले साहित्यकार बानियाँको चर्चा चुलिएको छ ।
काठमाडौं । कोभिड –१९ को जोखिमका कारण शिक्षालय बन्द रहेका स्थितिमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता गराउने नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशिका, अध्ययन सामग्री,